Maxaad ka ogtahay Xubnaha Urur Diimeedyadda ee ku milmay Dawladda Somalia,? – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Breaking News English News Maqaalo Somali News Top News
by admin 17th June 2017 17th June 2017 0137
Dawladda Somalia oo uu hogaanka u hayo Madaxwayne Maxamed C/laahi Farmaajo oo aan ka mid ahayn Urur Diimeedyadda ka jira Somalia ayaa markii ugu horaysay waxaa la dareemayaa in Xafiisyadda Maamulka ay awood ku yeelanayaan Xubno ka socda Urur Diimeedyadda Somalia.
Xafiiska Madaxwaynaha ayaa dhawaan waxaa loo magacaabay Agaasime Guud oo laga dhigay Fahad Yaasiin oo ka tirsan Urur Diimeedka Akhwaanul Muslimiin ee ay taageerto Qadar. Waxaana Ku Xigeen looga dhigay C/risaaq Shoole oo la tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay Urur Diimeedka Saaciduun Bil Xaq ee ay wal walka ka muujiyeen Culumadda Soomaaliyeed oo isna ay taageerto Dawladda Qadar.
Haddaba waa Kuma Fahad Yaasiin?
Fahad Yaasiin Waa Wariye ka tirsanaa Telefeshinka Aljazeera. waxaana uu xiriir dhaw la leeyahay Dawladda Qadar oo la aaminsan yahay inuu u qaabilsan yahay Arrimaha Somalia. Waxaana Fahad Awoodiisa Siyaasadeed ay soo ifbaxday markii uu door ku yeeshay Doorashadii 2012 ee uu ku soo baxay Xasan Sh Maxamuud oo la aaminsan yahay inuu ahaa Shaqsigii fududeeyay Dhaqaalaha Doorashadda ay ku galeen Xisbiga Damuljadiid, lkn markii la doortay Xasan Sh ayeey kala boodeen Fahad oo isku diyaarinayay inuu Dawladda daaha gadaashiisa ka maamulo.
Fahad waxa uu mar kale soo muuqday 2016 kii markii la isku diyaarinayay Doorashadda Madaxtinimadda Somalia oo uu taageerayay Madaxwaynaha hadda taladda haya Maxamad C/laahi Farmaajo oo uu xooggaa dhaqaale ah uga keenay Dawladaha Qadar iyo Iiraan oo ka caraysaa Goáankii uu Xasan Sh xiriirka ugu jaray Iiraan.
Fahad waxa uu sidoo kale marar dhawr ah Dhaqaale si qarsoodi ah u soo gaarsiiyay Ururka Alshabaab oo ay taageerto Dawladda Qadar. Waxaana uu Fahad sidoo kale sabab u ahaa in Hogaamiyihii Ururkii Argagixisadda ee Xisbul Islaam, Cumar Iimaan Abuubar, iyo Maxamad Siciid Atam oo ka tirsanaa Alshabaab ay Magan galyo siiso Dawladda Qadar, isagoo sidoo kale gar wadeen ka ahaa Qorshe ay Dawladda Qadar ku doonaysay in Sh Xasan Daahir Aways isna la dajiyo Qadar, taasoo ay diiday Dawladda Somalia.
Fahad waxay Xogta Hornafrik heshay muujinaysaa inuu la shaqeeyo Sirdoonka Qadar. Waxaana uu u yahay Il Wareed ay Macluumaadka Somalia ka qaataan, una dirsadaan Hawlaha ay ka rabaan Alshabaab. haddana waxa uu ku darsaday Dawladda Somalia oo isagu hadda uu si dadban u maamulo.
Dad badan ayaa aaminay in Siyaasiga Fahad uu taageero uu noqonayo Madaxwayne. laakiin Dadka Siyaasadda u dhuun duleela waxay aaminsan yihiin in Fahad uu yahay Dulaal Dawladda Qadar ee uusan saamayn ku lahayn Siyaasadda Somalia. Waxayna Xeel Dheerayaashu ku doodayaan in Fahad uu sabab u noqon doono Fashilka Farmaajo oo haddaba ka tuuray haadaan markii uu ku qasbay inuu taageero Qadar, dhabarkana xijiyo Imaaraadka iyo Sucuudiga oo Xiriir Ganacsi la leh Somalia, taageerana siinayay Dawladihii isaga dambeeyay Somalia.
Waa Kuma C/risaaq Shoole?
C/risaaq Maxamuud Shoole Waa Agaasime Ku Xigeenka Madaxtooyadda Somalia waxa uu horay Maamule uga soo noqday Markaz Daarul Culuum oo ay ka soo baxeen inta badan Dhalinyaradda Alshabaab. Waxaana uu Markazkaasi ahaa goob lagu tababaro Xagjiriinta oo ay maalgaliso Dawladda Qadar, kadib waxa uu C/risaaq ka mid noqday Xubno ku dhawaaqay Ururka Saaciduun Bil Xaq oo isna ay maalgalinayso Qadar.
Shoole waxa uu gacan saar la leeyahay Ururka Alshabaab oo ah Koox Argagixiso ah oo ka dagaalanta Geeska Afrika. Waxaana hadda ka soo muuqashadiisa Madaxtooyadda Somalia ay walaac galisay Sirdoonka Reer Galbeedka oo shaki ka muujinaya sida loola wadaagi Macluumaad Dawlad ay Xafiisyadeedii ugu sareeyay ka arrimayaan Shaqsiyaad gacan saar la leh Alshabaab.
Daawo: Madaxweyne farmaajo muxuu maanta u sheegay dadweynihii salaada jimco kusoo tukaday masjidka isbaheysiga islaamka??
Dhageyso: Galmudug oo gacanta kusoo dhigtay maleeshiyo hubeysan oo dad xoolo dhaqato ah ku laayay deegaanka….
Daawo: Ra’isul wasaare kheyre oo caawa hooygiisa ku booqday guddoomiye jawaari
admin 11th April 2018 11th April 2018
Sawirro: Mas’uuliyiin ka socota Wasaaradda Amniga oo Shir looga hadlaayay Qaraxyada uga qeyb galay magaalada Geneva